ဘလော့ မှတ်စု: အမေ ကျေနပ်နိုင်ပါစေ
ဒီလိုရင်ထဲကနေ နှစ်နှစ်ကာကာ ခေါ်ခွင့်မရခဲ့တာအတော်ကြာခဲ့ပါပြီ အမေ...။ သူများ တွေ အမေ လို့သူတို့ရဲ့ အမေ တွေကို ခေါ်လိုက်တဲ့အသံကိုကြားရရင်ကျွန်တော် အမေ့ ကိုပိုလို့သတိရမိပါတယ် အမေ...။ အခုချိန်မှာ အမေ သာရှိနေအုန်းမယ်ဆိုရင် ဘယ် လောက်ကောင်းမလည်းဆို တဲ့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွေးကို ကျွန်တော် ပြန်တွေး တော နေမိပါတယ် အမေ…။ အမေ့ အပေါ်မှာ ကျွန်တော် ကျေးဇူးဆပ်ချင်ပါသေးတယ် အမေ…။ အမေ နဲ့ပတ်သတ်ပြီးရလာမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က ချီးမွမ်းတာတွေ ကိုခံရင်း ကျွန်တော် ဂုဏ် ယူချင် ပါသေးတယ် အမေ…။ ကျွန်တော် တို့မောင်နှမတွေကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမေ မျက်နှာပွင့်လန်းခဲ့ရသလို အမေ့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ မောင်နှမတွေ စံပြ အဖြစ်ဂုဏ်မငယ် ခဲ့ရပါဘူး အမေ…။
အိမ်ထောင်ရေးကံမကောင်းလို့ တခုလပ်ဆိုတဲ့ဘ ၀ ကိုခံယူရင်း ကျွန်တော် တို့မောင်နှမတွေပေါ် အမေ့ ရဲ့မေတ္တာတွေပုံ အောပေးခဲ့တာ တွေ အချစ်ပိုခဲ့တာတွေ ကျွန်တော် အခုချိန်ထိအမှတ်ရနေဆဲပါ အမေ…။ အဖေ ထားခဲ့တဲ့ဘ၀မှာ ကျွန်တော် တို့မိသားစုတွေအတော်လေးဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်နော်. အမေ..။ အိမ်စား ရိတ်၊ မမ နဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ကျောင်းစားရိတ် အမေ ဘယ်လိုရှာမလည်း အမေ...။ အမေ ဘာမှမ လုပ် တတ်မ ကိုင်တတ်မှန်း ကျွန်တော် သိပါတယ် အမေ…။ ကျွန်တော် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာလည်းနားလည်ပါတယ် အမေ …။ ကျွန်တော် တို့မိသားစုမှာ အဖေ မရှိတဲ့ နောက်ပိုင်း ယောက်ကျားသားဆိုလို့ ကျွန်တော်ဘဲရှိတာမဟုတ်လား အမေ…။ အမေ ကျွန်တော်တို့ကိုဈေးရောင်းကြွေးစရာမလိုပါဘူး အမေ...။ ကျွန်တော်လည်းအတော် အတန်အ ရွယ်ရောက် နေပါပြီ အမေ…။ ကျွန်တော့် မှာကျောင်းဆက်တက်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ် အမေ…။ မမ ကျောင်းဆက်တက်ဖို့ ကျွန်တော် ကျောင်း ထွက် မှဖြစ်မှာပါ အမေ…။ အမေ စိတ်ထိခိုက်လို့ပြောမထွက်ခဲ့ပေမယ့်အမေ့ရဲ့ရင်ထဲကို ကျွန်တော် မြင်နေရပါတယ် အမေ…။ ကျွန်တော် မမ ကိုဦးစားပေးမှာပါ အမေ…။ နောက် ပြီး မမ ကဘွဲ့ရတော့မှာဆိုတော့ထွက်ချင်းထွက် ကျွန်တော် ဘဲထွက်သင့် တာပေါ့ အမေ...။ ဒီနှစ်၁၀တန်းအောင်ရင် ကျွန်တော် သိပ်သွားချင်တဲ့ရေကြောင်းသိပံ္ပကိုလည်း ကျွန် တော် မသွားချင် တော့ပါဘူး အမေ...။ အခုချိန်မှာဖြစ်ချင်တာထက်လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာကိုဘဲ ကျွန်တော် ရွေးချယ် ရတော့မယ် အမေ…။ ကျောင်းမထွက်ဖို့ အမေ တားရင်းကျတဲ့မျက်ရည်ဟာ ကျွန်တော့် ကြောင့် အမေ ကျခဲ့ ရတဲ့နောက်ဆုံးမျက်ရည်ပါ အမေ …။ အမေ နဲ့မမ အတွက် ကျွန်တော့် ဘ၀ကိုပေးဆပ်ဖို့ ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ် လိုက်ပြီ အမေ…။
ကျွန်တော် ပညာရေးတပိုင်းတစနဲ့ကျောင်းထွက်ခဲ့ရတဲ့အပေါ်မှာလည်း အခု ချိန်အထိနောင် တမရခဲ့ပါဘူး အမေ …။ အမေ့ကိုစောစောစီးစီး အလုပ်အကြွေးပြုခွင့် ရတယ်လို့ ကျွန်တော် ခံယူပါတယ် အမေ…။ အင်း အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုမှ ကျွန်တော် ဘာအလုပ် လုပ်ရမှန်းမသိပါဘူး အမေ…။ အရင်ကျောင်းသား ဘ၀ကနေ တန်းပြီးအလုပ်သမားဆိုတဲ့ဘ၀ကိုဝင်လာရတော့ဘာလုပ်ရမှန်းကိုတကယ်မသိပါဘူး အမေရာ….သေချာတာကတော့နေ့စဉ်ဝင်ငွေရှိတဲ့အလုပ်ကိုအရင်ရှာရမယ်ဆိုတာပါဘဲ အမေ…။ဘာ လို့လည်း ဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ၊ အမေ့ ရဲ့ထမီအကောင်းစားလေးတွေ အပေါင် ဆိုင်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် သိနေလို့ပါ အမေ…။ ဘေးအိမ်ကဦးလေး အကူအညီနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးတခုမှာ ကျွန်တော် နေ့စားအလုပ် ကြမ်းသမားအဖြစ်အလုပ်ရတယ် အမေ…။ စလုပ်လုပ်ချင်းတော့လုပ်စကလည်းမရှိ၊ ပင်ကလည်းပင်ပမ်းနဲ့မျက် ရည်တောင်ကျမိပါတယ် အမေ ရယ်…။ ညနေအလုပ်ပြီးလို့အိမ်ပြန် ချိန်အလုပ်ရှင်ပေးတဲ့ နေ့စားခလေး ၁၅၀ကျပ် ဟာတနေ့တာ ကျွန်တော့် ရဲ့အမောတွေကိုပြေစေခဲ့ပါတယ် အမေ…။ အိမ်ကိုရောက် တော့ ကျွန်တော့် ကိုစောင့်နေတဲ့အမေ့ရဲ့လက်ထဲကိုကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ပထမဦးဆုံးရတဲ့ချွေးနှဲစာငွေလေးအပ် လိုက်တော့ကျလာတဲ့ အမေ့ မျက်ရည်ဟာ ကျွန်တော့် ဆီကိုပါကူးစက်လာပါတယ် အမေ…အမေ ကျတဲ့မျက် ရည်ဟာ ကျွန်တော် ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာလာတာကိုမလွဲသာလို့သာလက်ခံလိုက်ရပေမယ့် ကျွန်တော့် အတွက် စိတ်ထိခိုက်ပြီးကျလာတဲ့မျက်ရည်ဆိုတာ ကျွန်တော် သိပါတယ် အမေ ….။ ကျွန်တော် ကျလာတဲ့ မျက်ရည်ဟာ အမေ ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတခု ကိုဖြည့်ဆည်း ပေးလိုက်ရလို့ ကျေနပ်ပီတိဖြစ်လို့ကျလာတဲ့မျက်ရည်ပါ အမေ..။ အဲဒီနေ့ ကတည်းစပြီး ကျွန်တော် ဒီပီတိစိတ်လေး ကိုအရမ်းနှစ်သက်မိတယ် အမေ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အဲ ဒီပီတိစိတ်လေး ဟာနောက် နေ့တွေနေ့တွေ အတွက်ခွန်အားတွေပါ အမေ…။ နောက်ပြီး ကျွန်တော့်ကြောင့် အမေ စိတ်ချမ်းသာတာကို ကျွန်တော် အရမ်းမြင်ချင် မိတယ် အမေ…။ ဒါကြောင့် အမေ မကြိုက်တာ ကျွန်တော် ဘာမှမလုပ်ခဲ့သလို အမေ ဆုံး မခဲ့တဲ့ အတိုင်း ကျွန်တော် နေလာခဲ့တာဒီနေ့ဒီအချိန် အထိပါ အမေ…။
ကျွန်တော် လူတော်တယောက်မဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အမေ့ ကျေးဇူးကြောင့်လူကောင်းတယောက် တော့ဖြစ် ခဲ့ ပါတယ် အမေ….။ အမေ့ကိုအလုပ်အကြွေးပြုနေခဲ့ရလို့လည်း ကျွန်တော် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အစစအရာရာ လူ ချစ်လူခင်ပေါပြီး အမြဲတမ်းကူညီစောင်မတတ်တဲ့ သူတွေ၊ အလုပ်ရှင်တွေ၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ပြီး ကျွန်တော့် ဘ၀လည်း တစတစ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ် အမေ…။ ဒါလည်း အမေ့ ကိုအလုပ်အကြွေးပြုလို့ ကျွန်တော် ချက်ချင်းပြန်ပြီးခံစားရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဆိုတာ ကျွန်တော် အခုချိန်ထိယုံမှား သံသယမဖြစ်မိပါ ဘူး အမေ…။ ကျွန်တော် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္မဏီတခုမှာစာရင်းကိုင်လုပ်နေတဲ့အချိန် အမေ့ကျန်း မာရေး တော်တော်ဆိုးလာတယ်နော် အမေ …။ ကျွန်တော် အလုပ်ကပြန်ရင်အရင်ဆုံး အမေ့ မျက်နှာကိုအရင် ကြည့်ပြီး အမေ နေကောင်းရဲ့လား ဆိုတဲ့စကားကို အမေ အပြုံးလေးနဲ့ပြန်ပြီး အမေ နေကောင်းပါတယ် သား ငယ် ရယ်… ဆိုတဲ့စကားလေးတွေဟာ ကျွန်တော် တို့သားအမိရဲ့နေ့စဉ်နှုတ်ဆက် နေကျစကား လေးတွေပါ အမေ…။ ဒါပေမယ့် အမေ အရမ်းဟန်ဆောင်ကောင်းတယ်နော် အမေ…။ အမေ ခံစားနေတဲ့ဝေသနာကို ကျွန်တော် တို့မောင်နှမတွေမသိအောင်ဖုန်းထား နိုင်ခဲ့တယ်နော် အမေ…။ အမေ ဘာလို့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် သိခဲ့ပါတယ် အမေ…။ အမေ့ နှလုံးရောဂါအကြောင်း ကျွန်တော် တို့မောင်နှမတွေသိရင် မဖြစ်ဖြစ် အောင် ကုမယ်ဆိုတာ အမေ တွေးထားမှာပါ…။ အဲဒီအတွက်ကုန်ကျလာမယ့်ဆေးဖိုးဝါးခတွေအတွက် ကျွန်တော် တို့မောင်နှမတွေအပေါ်တာဝန်မပိုစေချင်လို့ ဝေသနာကိုကြိတ် မှိတ်ခံ စားရင်း ကျွန်တော် တို့အ တွက်ပေးဆပ်သွားတာလား အမေ…။ အမေ့ ရောဂါအကြောင်း ကျွန်တော် တို့နောက်ကျမှသိခွင့်ရတယ် အမေ…။ ပတ်ဝန်း ကျင်အိမ်နီးနားချင်းတွေက အမေ့ ရောဂါအခြေအနေကိုသိပေမယ့် အမေ့ရဲ့ မေတ္တာရပ် ခံတောင်းပန်မှု့ ကြောင့် ကျွန်တော် တို့ကိုအမှန်မပြောကြဘူး အမေ…။ အမေ မရှိတော့မှ ကျွန်တော် တို့မောင်နှ တွေအဖြစ်မှန်ကိုသိရတာပါ အမေ…။ အမေ ကျွန်တော် တို့အပေါ်အသက်ပေးချစ်ပြီးအ နစ်နာခံပေး ဆပ်သွားတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် တို့သိပါတယ် အမေ ရာ…။
အမေ့ ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေကို အမေသိနေခဲ့တယ်နော် အမေ…။ ကျွန်တော် အလုပ်က ပြန်လာရင်ထူး ဆန်းတဲ့စကားတွေ အမေ အရမ်းပြောလာတယ်နော် အမေ…။ မမ ကို စောင့်ရှောက်ဖို့….သားကယောက် ကျားလေးမို့တချိန်ကျရင်အိမ်ထောင်ရက်သားထူ ထောင်မှာပါ…..အဲဒီကျရင်ငါ့ သား ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကို အမေ့ လိုမျိုးဒုက္ခတွေရောက် အောင်မလုပ်ဖို့ သား ရဲ့ရင်သွေးလေးတွေကိုလည်း သား တို့ခံစားခဲ့သလိုမျိုး၊ သား တို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေမကြုံတွေ့ရဖို့ သား မှာတာဝန်အများကြီးရှိတယ် လို့ အမေ ပြောခဲ့တယ်နော် အမေ..။ သား တို့မောင်နှမတွေကို အမေ စိတ်ချသွားပါပြီ လို့အမေ ပြောပြီး ကျွန်တော့် ရဲ့လက်ပေါ်မှာတင် အမေ ညင် ညင်သာသာနဲ့ဘ၀တပါးကိုကူးပြောင်းသွား တယ်နော် အမေ…။ ကျွန်တော် တို့မောင်နှမတွေအတွက်တော့ ခိုကိုးရာမဲ့ခဲ့တာပေါ့ အမေ...။ အမေ ကျွန်တော် တို့ကိုတကယ်စိတ်ချပြီးထားသွားတာလား အမေ...။ တမလွန် ကနေ အမေ ကျွန်တော် တို့ကိုစောင့်ရှောက်နေမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ယုံကြည်နေပါ တယ် အမေ...။ ကျွန်တော် အခု အမေ မြင်စေချင်တဲ့၊ဖြစ်စေချင်တဲ့လူတယောက်အ ဖြစ်ဘ၀ကိုရပ်တည်ရင်း အမေ့ ရဲ့ကျေးဇူးတွေ ကို ဆပ်နေတုန်းပါတယ် အမေ…။ အမေ ပြောခဲ့ သလို ကျွန်တော့် ရဲ့ဇနီးသည်အပေါ်မှာလည်း ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ မိခင်တယောက်လို၊ နှမတယောက်လိုဆက်ဆံပါတယ် အမေ…။ ကျွန်တော့် ရဲ့သားလေးအပေါ်မှာ လည်းဖခင် တယောက်ရဲ့ ၀တ်တရားမပျက်ကွက်အောင် ကျွန်တော် စောင့်ရှောက်ပါတယ် အမေ…. အမေ အရမ်းဖြစ်စေ ချင်တဲ့မိသားစုဘ၀လေးကို ကျွန်တော် ပိုင်ဆိုင်နေတာ အမေ့ ကိုမြင်စေချင်လိုက်တာ အမေ ရယ်…။ အခု လို အဆင်ပြေနေတဲ့ ဘ၀မျိုးလေးနဲ့ အမေ့ ကို ကျွန်တော် ထပ်ပြီးအလုပ်ကြွေးပြုချင်လိုက်တာ အမေ ရယ်…။ ကျွန်တော့် ဘ၀မှာဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးနောက်ထပ်ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် သိပါတယ် အမေ…။ အခုချိန်မှာ အမေ့ အတွက် ကျွန်တော် လုပ်နိုင်တာကတော့ အမေ့ ရဲ့ဆုံးမစကားတွေကုိလိုက်နာပြီး အမေ့ အတွက်ရည်စူးလို့ကောင်းမှု့ကုသိုလ်လေးတွေ အမြဲမပျက်လုပ်ရင်းနဲ့ဘဲ ကျွန်တော် အမေ့ ရဲ့ကျေးဇူးကိုဒီနည်းနဲ့ ဘဲဆပ်ခွင့်ရတော့မှာပါ အမေ…။ အဲဒီအတွက် အမေ ကျွန်တော့် ကိုကျေနပ်ပါ အမေ...။ အရာအားလုံးအတွက် တမလွန်ကနေ အမေ ကျေနပ်နိုင်ပါစေ လို့လည်း ကျွန်တော် ဆုတောင်းရင်း အမေ ကောင်းရာမွန်ရာဘုံရာ ဘ၀ ရောက်ပါစေ အမေ….။ ။
(စကားချပ်) ။ ။ ဖတ်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..။ သူငယ်ချင်းတို့တွေမှာ အမေတွေ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်သူငယ်ချင်းတို့အတွက်အင်မတန်ကိုမှကုသိုလ်ထူးပါတယ်…။ မိခင် ကိုမှီပြီးရ တဲ့ကုသိုလ်ဟာတခြားကုသိုလ်တွေနဲ့မတူပါဘူး..။ နောင်သံသရာထိအောင်လည်းမစောင့်ပါဘူး...။ ဒီဘ၀မှာ တင်ချက်ချင်းအကျိုးခံစားရ တတ်ပါတယ်…။ မိဘတွေကိုအလုပ်အကြွေးပြုတဲ့အခါမှာဘာမျှော်လင့်ချက်မှမထား ဘဲစိတ်ထားဖြူစင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်…။ မလွဲသာလို့ပေးကမ်းကြွေးမွေးနေရတယ်လို့ဘယ် တော့မှသဘော မ ထား ပါနဲ့…။ အဲလိုသဘောထားရင်ကိုယ့်အလှည့်ကိုလည်းပြန်ရောက် လာမှာမလွဲပါဘူး…။ ကျွန်တော်အထက် မှာပြောခဲ့သလိုနောင်သံသရာထိအောင်မစောင့် ပါဘူး…။ မိဘအပေါ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်း တဲ့အကျိုး ခံစားရသလို၊ မကောင်းတာ လုပ်ရင်လည်း မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုဒီဘ၀မှာပြန်ပြီးခံစားရ တတ်ပါတယ်…။ ဒါကြောင့်သူ ငယ်ချင်းအားလုံး အမိ၊ အဖ ကျေးဇူးကိုဆပ်ခွင့်ကြုံတုန်းအချိန်လေးမှာ ဆပ်နိုင်ကြပါစေ လို့ဆန္ဒပြုရင်း သူငယ်ချင်းအားလုံးရွင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ…..။ ။
Posted by ရာဇာထွေး at 11:25 PM